June | 2014 | Somaliland Hargeisa City
Hanaqaad Show: Wadaniyadda Iyo Muwaadinka Sahra Halgan
30 June, 2014 — somaliland1991
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Maxamed Biixi Yoonis iyo wasiiarka duulista iyo hawada oo Ethiopia iyo Kenya u ambo-baxay
23 June, 2014 — somaliland1991
ururka qoraaga Soomaalilaand kulan qado-sharaf ah la qaatay guddoomiyayaasha labada jaamacaddood ee Camuud iyo Hargeysa
22 June, 2014 — somaliland1991
Sweden(OWN)Shalay oo ay ku beegnayd 20 bishan Juun sannadkan 2014, waxa uu ururka qoraaga Soomaalilaan kulan qado-sharaf ah la qaatay guddoomiyayaasha labada jaamacaddood ee Camuud iyo Hargeysa. Qado-sharaftan sida heerka sare ah u dhacday ayaa ka qabsoontay magaalada Stockholm ee waddanka Iswiidhan. Kulan si wacan loogu ballansannaa buu ahaaye, markii laga soo baxay salaaddii jimce ayaa goob bilicsan oo ballanku ahaa waxa si qiime leh ururku wakhti qaali ah la qaatay labada guddoomiye.
Ugu horrayn waxa erey soo-dhawayn ah madasha ka jeediyay mudane Jaamac Iswiidhan oo ka mid ah odayaasha jaaliyadda Soomaalilaan ee Stocholm, kana mid ah bahda qalinlayda. Intaa kadib waxa isna hadalkii la wareegay Dr Nuux Ismaaciil oo ah xubin ka tirsan ururka qoraaga Soomaalilaand, kuna hadlayay magaca ururka. Nuux ayaa si sharaf iyo maamuus ku jiro u soo dhaweeyay labada guddoomiye, isaga oo u sheegay in ururka qoraaga Soomaalilaan laantiisan Iswiidhan si weyn ugu faraxsan tahay la kullankooda, aadna uu ururku u xiisaynayo la shaqaynta labada jaamacadood. Intaa kadib Muuse Maxamuud Ciise ( Dalmar ) oo ah xoghayaha ururka ayaa warbixin kooban ka bixiyay taariikh iyo waxqabadka ururka qoraaga Soomaalilaan, gaar ahaan laantiisan Iswiidhan oo ah halka ugu badan ee ay ka soo baxaan buugaagta afka soomaaliga ku qorani.
Intaas ka dib waxa hadalkii la wareegay guddoomiyaha jaamacadda Camuud borofisoor Sulaymaan Axmed Guuleed. Sulaymaan ayaa xogwaran dhammaystiran ka bixiyay jaamacadda uu hoggaanka ka yahay iyo guud ahaan xaaladda waxbarasho ee dalka, waxaanu si weyn ugu dheeraaday sidii ay ku bilaabmantay jaamacadda Camuud iyo waayihii ay bilowgii la soo mareen jaamacadda. Sidoo kale waxa uu Sulaymaan ururka qoraaga la wadaagay taariikhda guud ee waxbarasho ee Soomaalilaan. Dhanka kale waxa isna hadal qiimo badan madasha ka jeediyay guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa diktoor Cabdi Xuseen Gaas. Guddoomiye Cabdi waxa uu isna sidoo kale si mug leh uga hadlay waayaha waxbarasho ee Soomaalilaan iyo gaar ahaan hawsha ay jaamacadda Hargeysi dalka u hayso, waxaanu caddeeyay sida ay ugu heelan yihiin in ay xidhiidh aqooneed la yeeshaan qurbajoogta iyo waliba cid kasta oo wax ku soo kordhinaysa waxbarashada dalka.
Gebogebadii kulanka ayaa ururka qoraagu buugaag kala duwan iyo warsidaha Alif guddoonsiiyay labada masuul. Waxaanu sidoo kale ururka qoraagu u soo jeediyay labada jaamacadood in ay xoogga saaraan sidii ay ardayda ugu dhiirrigelin lahaayeen kor u qaadidda akhriska iyo qoraalka iyo waliba in ay ardaydu qayb laxaad leh ka qaadato kaydinta iyo ururinta taariikhda dhaxalgalka ah ee waddanku leeyahay. Tusaale ahaan in arday kasta oo jaamacadda ka baxaya waajib looga dhigo in uu wax ka qoro taariikhda bulshada laamaheeda kale duwan. Tusaale ahaan in ay ardayda cilmiga bulshada barataa ururiso taariikhda haldoorka dalka iyo taariikhda dhaqan-dhaqaale ee bulshadeenna iyo waliba in ardayda sayniska barataa iyana ururiyaan aqoonta deegaanka.
Waxa sidoo kale xusid in ururka qoraagu uu kullan kan la mid ah uu la qaatay aqoonyahan Siciid Axmed Xasan, oo ah guddoomiyaha jaamacadda Gollis. Kullankan ayaa magaalada Stockholm ka dhacay 13 bishan Juun sannadkan 2014.
Ururka qoraaga Soomaalilaan laantiisa Iswiidhan
Ururka Qoraaga Somaliland
Somaliland Writers Association
Hadhimo sharafeed Ururka Qorayaasha Somaliland ee Iswidhan u sameeyey qoraaga, ahna agaasimaha madaxtooyada Somaliland Xasan Cabdi Madar.
Shalay oo taariikhdu ahayd 21-06-2014, markay saacaddu ku beegnayd 13:30 ayaa sidii ballantu ahayd lagu kulmay hadhimo ay soo diyaariyeen Ururka Qorayaasha Somaliland ee Iswidhan. Kulankaas oo lagu soo dhoweynayey agaasimaha madaxtooyada Somaliland, ahna xubin ka mid ah tiirarka Ururka Qorayaasha, Xasan Cabdi Madar.
Ilaa bilawgii ururka Xasan waxa uu ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon ee si gaar ah iyo si guudba wax badan ugu soo kordhiyey ururka. Xasan waxa uu qoray buugaag farabadan, waxaana ka mid ah: “Sirta guurka”, “Barbaarsame”, Hiil iyo Nabaadiino. Qoraalada gaarka ah ee xikmaddu ku lingaxan-tahay aad bay u badan yihiin. Sannadihii ugu danbeeyeyna waxa uu hayey xilka agaasinka madaxtooyada Somaliland oo uu ilaa imminka hawsheeda mas’uulnimo hayo.
Xubnaha ururka ee shalay kulanka ka qayb qaatay waxa aya kala ahaayeen,
Guddoomiyaha Ururka Qorayaasha ee Iswidhan Sayid-Axmed M. Yuusuf (Dhegey), Yuusuf Xaaji Cabdillaahi Xasan, Cumar Xaaji Bile Adan, Maxamed Xirsi Guuleed, Nuux Ismaaciil Maxamed (Ina Airline). Waxa lagu soo sharfay kulankaas odayaal ka mid ah odayaasha reer Stockholm oo ay ka mid ahaayeen Ibraahin Maxamed Cigaal (Xuble), Maxamed Xaaji Ismaaciil, Jaamac Maxamuud Cumar (Jaamac Iswidhan), Inj. Maxamed Ibraahin (Maxamed Dheere), Axmed Yuusuf Abokor iyo Ismaaciil Shafeec.
Kaftan iyo sheeko dabadeed, waxa hadalka bilaabay guddoomiyaha ururka oo ku soo dhoweeyey Xasan Cabdi Madar, sheegayna in Xasan uu ka mid yahay ururka Qoraaga Somaliland. Maadaama oo uu ka mid ahaa, maantana uu xil muhiim ah hayo in ay ururka oo dhan u tahay sharaf. Kadib waxa lagu soo dhoweeyey Cumar Xaaji Bile Adan, oo si qoto dheer uga warramay hawlaha ururka, tibaaxayna in ururku uu in dhoweyd soo saaro warside, la magac baxay ALIF oo saddexdii biloodba hal mar soo baxa. Loona baahanyahay in dhammaan qoysaska soomaalida ee deggen Iswidhan soo dalbadaan oo uu gurigooda ugu yimaaddo. Waxa kaloo si mug leh uga warbixiyey ururka Maxamed Xirsi Guuleed. Erey guubaabo iyo talo ba isugu jirey ayuu Yuusuf Xaaji Cabdillaahi Xasan, isaguna si faahfaahsan ula wadaagay kulankii shalay, oo ku bilaabmay jawi aad u fiicnaa.
Intaa ka dib, waxa si goos-goos ah loo wadaagayey warbixinno iyo talooyin ku socday UQS, talooyinka wax ku ool-ka ahaa waxa soo jeediyey Ibraahin Maxamed Cigaal, Jaamac Maxamuud Cumar, Maxamed Xaaji Ismaaciil iyo Inj. Maxamed Ibraahin. Hadallo markii danbe u ekaa dood-wadaag baa dhex maray odayaashii iyo qorayaashii madasha ku kulmay. Waxa ay dooddu salka ku haysay qoraal yarida dadkeenna. Waxa hadalku u dhacayey, urur ahaan wax faa’iido leh qora iyo odayaal ahaan, maxaa idinku wax u qori la’dihiin. Tusaale odayaasha goobta fadhiyey waxa ka mid ahaa saddex soo maray wasaaraddii arrimaha dibedda, kana soo shaqeeyey safaaradaha dibedda. Ibraahin Maxamed Cigaal (Xuble) lix sannadood buu joogay safaaraddii soomaalida ee USA, laba sannadood ayuu dalkii la odhan jiray USSR uu safaaradda soomaalida gacanta ku hayey. Waa labadii dal ee awoodda dunida kala sheegan jiray.
Cumar Xaaji Bile Adan oo ka soo shaqeeyey safaarado badan oo ay ka mid ahayd tii Shiinaha, Tansaaniya iyo Biljimka ayaa goobta fadhiyey. Jaamac Maxamuud Cumar (Foodyacay) oo ku caan ah Jaamac Iswidhan, waxa uu ka soo shaqeeyey muddo dheer safaaradda soomaalida ee Iswidhan. Dhan kastana guubaabo, qoraalka ah ayaa la isla qaatay. Maxamed Xaaji Ismaaciil, ayaa erey muhiim ah dooddii ku soo afmeeray, oo yidhi: Qofka wax qora, inta badan waa qof ay u fududdahay oo xiiseeya wax-qoraalka, ee dadku wax ma wada qoraan. Waase laga qoraa, qofka wax badan haya ee lagu tuhmayo. Waxa isna erey kooban oo guubaabo ahaa ka yidhi Axmed Yuusuf Abokor. Waxana lagu soo gunaanaday warbixintii agaasimaha madaxtooyada Somaliland Xasan Cabdi Madar, oo markii danbena la weydiiyey dhawr su’aalood oo uu si faahfaahsan uga jawaabay. Waxaana farriintiisa guud ahayd, oo uu odayaashana gaadhsiiyey farriin ah, in reer Iswidhan laga sugayo deeqdii ay ugu baaqeen dawga Ceerigaabo.
Ururka Qorayaasha Somaliland, waxa uu farriin guud iyo mid gaar ah ba u gudbiyaa, in xukuumaddu xoogga saarto diiwaanka-qaranka. Dal aan lahayn diiwaan, waa dal aan jirin. Hay’adda diiwaanka qaranku waa ta ugu muhiimsan, marka laga hadlayo dal iyo qaranimadiisa, jiritaankiisa ka awoow ka awoow. Dhaqan, suugaan iyo taariikhba waa hay’ad koobsan lahayd waxkasta oo dhaxal u ah dalka iyo dadkaba. Ilaa maalinkaa maanta ah, ma jirto diiwaan qaranku leeyahay oo magacaa huwan. Waa farriin ururku hawada u marinayo xukuumadda, siina fari doona agaasimaha madaxtooyada Xasan Cabdi Madar.
Bahda Ururka Qorayaasha ee Iswidhan
22-06-2014, Axad /Stockholm/Iswidhan
Xukuumadda oo Heshiis Dhanka La Dagaalanka Budhcadbadeedda la saxeexatay Waaxdda Midowga Yurub
21 June, 2014 — somaliland1991
Madaxweynaha Somaliland oo maanta shir iskugu yeedhay madax ugu sareysa qaranka Jamhuuriyadda Somaliland
16 June, 2014 — somaliland1991
Wasiirka arrimaha dibedda jamhuuriyadda Somaliland Biixi Yoonis oo dalka ku soo noqday
15 June, 2014 — somaliland1991